Diaspora* sy ny Rindrambaiko Malalaka Hafa Hita Amin’ny Teny Occitan, Noho Ny Asan’ireo Mpandika Teny An-tsitrapo · Global Voices teny Malagasy
Diaspora* sy ny Rindrambaiko Malalaka Hafa Hita Amin'ny Teny Occitan, Noho Ny Asan'ireo Mpandika Teny An-tsitrapo
Voadika ny 26 Mey 2017 18:33 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, русский, Español, Italiano, English
Sary Flickr avy amin'ny “izy ilay tsy maintsy”, zon'ny mpamorona: CC BY-NC-ND 2.0 license.
Napetrak'ireo mpandika teny an-tsitrapo ny tambajotra sosialy malalaka Diaspora* ary azo jerena amin'ny teny fampiasa mahazatra indrindra ato amin'ny aterineto, tahaka ny teny Shinoa, Japoney, Espaniola sy ny Portiogey. Saingy topazo maso kely ny lisitr'ireo teny miaraka amin'ny teny sy andinin-teny 100% nadika ao amin'ny tranonkala, ary miavaka amin'ny rehetra ny teny iray: Occitan.
Teny Romance ampiasaina ao atsimon'i Frantsa sy ny faritra Espaina, Monacô, ary Italia ny Occitan. Miovaova arakaraka ny fiaviana ny isan'ny mpiteny ao amin'ny faritra, saingy mazava fa mihena ny tarehimarika. Manana fitenim-paritra maro ny fiteny Occitan, saingy nipoitra ny “Occitan Mahazatra” izay manome lanja ireo zavatra mitovitovy isan-karazany. Araka ny filazan'ny Atlas ho an'ny Teny Tandindonin-doza Manerantany ao amin'ny UNESCO, ny tenim-paritra Provençal, Auvergnat, Limousin, sy Languedocien dia sokajiana ho “atahorana tandindonin-doza,” ary tenim-paritra roa hafa, gascon sy Vivaro-Alpine, dia sokajiana ho “tandindonin-doza tanteraka.”
Nitondra ny teny Occitan tao amin'ny tambajotra sosialy ny ekipa kely mpandika teny, izay nanapa-kevitra fa ho toerana hafa manan-danja hampiroboroboana ny teny ny Diaspora*.
Iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa mpandika teny ny Quentin Pagès, izay miteny ny fitenim-paritra Lengadosiana, ifotoran'ny Occitan Mahazatra, ary miara miasa amin'ny fandikan-teny Occitan amin'ny sehatra hafa, toy ny Jitsi Meet, Wallabag, Framadate sy Mastodon. Nizara ny traikefany tamin'ny Rising Voices nandritra ny antsafa fohy izy
Rising Voices (RV): Nahoana no zava-dehibe aminao ny fisian'ny teny Occitan ao amin'ny Diaspora*?
Quentin Pagès (QP): Amin'izay afaka manomboka mampiasa azy ny olona ary manome fahitana ny fiteny izany. Tsy tiako rehefa manapa-kevitra ny olona fa ny fiteny iray dia manan-danja kokoa noho ny hafa. Raha ny hevitro, mitovy toy ny manaraka ny fiteny rehetra. Noho izany, zava-dehibe ho ahy ny fametrahana ny Occitan ho teny feno. Na dia tsy iray amin'ireo fiteny be mpampiasa indrindra ao amin'ny Diaspora*, amin'ny maha tetikasa loharanom-baovao misokatra azy aza ny teny Occitan, dia mbola azo ampiasaina indray amin'ny tetikasa hafa izay mety mampiasa ny voambolana mitovy sy ny andinin-teny ny asa fandikan-teny.
RV: Ahoana no nanombohanao ity tetikasa ity?
QP: Nanapa-kevitra hanomboka ny fandikana ny Diaspora* aho satria tafiditra tao anatin'ny lisitr'ireo sehatra loharanom-baovao malalaka hafa nangonin'ny fikambanana frantsay antsoina hoe Framasoft amin'ny alalan'ny fanentanany antsoina hoe “De-Google-ify the Internet” izany. Tamin'izany lisitra izany, nanampy nandika ny Jitsi Meet, Wallabag, Framadate, ary ankehitriny ny sehatra tambajotra sosialy vaovao antsoina hoe Mastodon aho. Ho an'ny fandikana ny Diaspora, ahitana olona telo ny ekipa ary mifandray indrindra amin'ny alalan'ny mailaka izahay.
RV: Inona no fanamby lehibe indrindra tamin'ny fandikana ny Diaspora* amin'ny teny Occitan?
QP: Mety manantena ianao fa ny zava-tsarotra ho an'ny fandikan-teny dia ny tsy fisian'ny voambolana na zavatra toy izany. Saingy tsy izany mihitsy, momba ny fahitana olona handinika ireo lahatsoratra nadika sy hanampy hiara-miasa amin'ny asa izany. Tsotra tsara ny fiteny Occitan mba hamoronana teny vaovao. Noho izany, eo amin'ny lafiny iray, maniry aho mba ho betsaka kokoa aminay ny mandika teny, saingy eo amin'ny lafiny iray hafa, vitsy loatra izahay, ka afaka manamarina fa nadika tamin'ny fomba mitovy daholo na aiza na aiza ny teny. Ho an'ny teny hoe “reshare,” mety mahita ohatra sasany ianao izay adika hoe “repartejar” izany, ary ny toeran-kafa toy ny “tornar partejar.” Tsy afaka manova azy ireo aho, saingy satria manana dika mitovy izy roa ireo ary samy marina, tapa-kevitra hamela azy roa ireo tahaka izany aho.
RV: Manana ny dikan'ny hoe hetsiky ny fiarahamonina mampiasa ny Diaspora* amin'ny teny Occitan ve ianao?
QP: Misy ny olona mbola tsy nanandrana ity tambajotra sosialy ity. Enga anie ny olona mba hampiasa fitaovana izay misy ny teny Occitan, saingy amin'izao fotoana izao, toa olona vitsy ihany no manome lanja ny fisian'ny teny ho manintona tanteraka. Mikasika ny Diaspora* amin'ny teny Occitan, mety ho fomba tena tsara ny manangona izay olona te-hanohana ny teny ka afaka miara-miasa amin'ny tetikasa hafa izahay. Raha ny hevitro “miasa ho an'ny teny” dia tsy maintsy atao amin'ny Occitan mba ho maharesy lahatra. Izany no antony hoe, aleoko mampiasa rindrambaiko malalaka satria fantatro fa raha manana fotoana aho, dia afaka mandray anjara sy mampiasa ny teniko indray mba ho hita sy ampiasain'ny olona.